एक कुनै पनि कार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र को - ग्याँस वितरण। यसलाई आफ्नो हालत मा छ र उपयोगिता फरक लोड अवस्था मा इन्जिन प्रदर्शन निर्भर गर्दछ। दल ड्राइभ पहिले प्रणाली को डिजाइन प्रयोग गरिएको। हालै तथापि, निर्माता झन् एक बेल्ट ड्राइभ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो एक अपवाद र "टाटा-एक्सेन्ट" थियो। सबैलाई थाहा हुनुपर्छ जो एक प्रक्रिया हो, - समय बेल्ट प्रतिस्थापन।
नै भनेर दिइएको भाग हो? को कैंषफ्ट actuates जो यो तत्व। मोटर कार 1 वा2को परिक्रमा को "टाटा-जोर" एक क्रैन्कशाफ्ट चरखी देखि शक्ति प्रसारण द्वारा उत्पादित छ।
तसर्थ, गति उच्च, अधिक अक्सर camshafts घुमाउन। प्रणाली एकदम जटिल छ र एक निश्चित लेबल समावेश छ। आफ्नो misalignment गम्भीर इन्जिन मर्मत हुन सक्छ।
कति बाहिर हुन पर्छ टाटा एक्सेन्ट मा समय बेल्ट प्रतिस्थापन? निर्माता यो तत्व 60-80 हजार एक स्रोत छ टिप्पणी। तर यो तत्व (ठीक कडा भने, उदाहरणका लागि) समय घोषणा अवधि अघि deteriorate गर्न सक्ने टिप्पण लायक छ। त्यसैले, तपाईं तत्व को विफलता को संकेत थाहा हुनुपर्छ।
यस समय बेल्ट प्रतिस्थापन गर्ने आन्दोलन को प्रकृति द्वारा आवश्यक कि गर्न "टाटा-एक्सेन्ट" निर्धारण, यो असम्भव छ। प्रमाणिकरण मात्र विधि - एक दृश्य निरीक्षण। त्यसो गर्न, खोल्न हुड र एक स्प्यानर रेन्च प्लास्टिक सुरक्षा कवर हटाउन। सबै को पहिलो दाँत को भित्र को अवस्था ध्यान। तिनीहरूले बाहिर सिटको छैन झिकेर गर्नुपर्छ।
साथै, चर्किएको (बाहिरी र भित्री पक्ष र,) बेल्ट मा अनुमति छैन। बेल्ट प्रतिस्थापन बताइएको अर्को साइन - यो आफ्नो delamination छ। ठूलो बल र yarns लागि निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले बाहिर चढेका गर्दा, यो खराब साइन छ। यस्तो तत्व थप सञ्चालन गर्न विषय छैन।
सुरू हुँदै। बेल्ट हटाउँदै
त्यसैले, पहिले तपाईं अगाडि देब्रे छेउमा jacking गर्न आवश्यक र पाङ्ग्रा हटाउन। अर्को, हुड खोल्न र पंप चरखी बोल्ट पंप loosen। सबै तपाईं चार बोल्ट वोल्ट नट आदि खोल्नु आवश्यक छ। अर्को, हावा-कंडीशनिंग संग बेल्ट निकाल्न (एक वाहन मा स्थापित गरिएको छ भने)। बेल्ट loosen गर्न, अलिकति तनाव रोलर वोल्ट नट आदि खोल्नु। अर्को, हामी alternator बेल्ट हटाउन आवश्यक छ। "12" हामी एक टाउको आवश्यक यस लागि। यसबाहेक, यस स्टीयरिंग सापट वोल्ट नट आदि खोल्नु। को एम्पलीफायर पनि हटाउन सकिँदैन।
बेल्ट फास्टनरों संग पंप चरखी हटाउँदै र ट्यांक GUR विच्छेद। अलिकति छेउमा अन्तिम पारी। अर्को, मोटर समर्थन (दाँया भाग संलग्न छ कि एक) को छेउमा हटाउन। जबकि काम सार्दा र यसको अवस्था निरीक्षण। इन्जिन तकिया कुनै चर्किएको र lyuftovat हुनुपर्छ। अन्यथा, हामी एउटा नयाँ परिवर्तन।
त्यसपछि समय बेल्ट लुकाउँछ जो प्लास्टिक कवर, वोल्ट नट आदि खोल्नु। को शाफ्ट टाउको को सहायता र "22" संग कि क्रैन्कशाफ्ट को बीचमा एक बोल्ट वोल्ट नट आदि खोल्नु। हुन होसियार - यो एक ठूलो प्रयास संग स्क्रूड छ।
तपाईं स्टार्टर cranking आफ्नो हात loosen गर्न सक्नुहुन्न भने (पीपीसी लीवर को "तटस्थ" मा अनुवाद)। पंप गर्न निर्देशन मा सिफ्ट समय tensioner रोलर र यो स्थितिमा यसलाई ठीक। को कैंषफ्ट चरखी बोल्ट वोल्ट नट आदि खोल्नु र चरखी नै निकाल्न। रूपमा थप गर्ने "टाटा-एक्सेन्ट" मा समय बेल्ट प्रतिस्थापन गरे? त्यसपछि तपाईं पुरानो रोल मा स्क्रू loosen गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो तपाईं पकड वसन्त मा सूत्रहरू चाट्नेछन् छैन गर्न आवश्यक छ।
अब तपाईं सुरक्षित पुरानो एकाइ बाहिर हटाउन सक्नुहुन्छ। रूपमा थप "टाटा-एक्सेन्ट" को समय बेल्ट प्रतिस्थापन गर्न बनेको छ? पूरा गाइड तल वर्णन गरिनेछ। यस थकित-बाहिर ड्राइव निराकरण र तनाव चरखी को प्रतिस्थापन बनाउन पछि। तिनीहरूले परिक्रमा समयमा सीटी वा अन्य हल्ला को मामला मा फरक हुन्छन्। तिनीहरूले सामान्यतया बेल्ट संग नै स्रोत छ। अर्को, यो क्रैन्कशाफ्ट चरखी ठाउँमा राखे। यो एक टोक रेन्च यसलाई स्थापना गर्न राम्रो छ। को बोल्ट को कस टोक - 90 देखि 120 एनएम गर्न। हामी यसलाई कस हरेक प्रयास गर्न हुनेछ। कुनै पनि अवस्थामा, स्प्यानर प्रयोग नगर्नुहोस्। त्यसैले तपाईं सबै अनुहारहरू चाट्नेछन् गर्न सक्नुहुन्छ। क्रैन्कशाफ्ट बोल्ट मात्र हेक्सागन मुड छ।
थप कार "टाटा-एक्सेन्ट" को समय बेल्ट प्रतिस्थापन मा बाहिर रूपमा छ? त्यसपछि सेट गाइड रोलर। उहाँले 43-50 एनएम को एक शक्ति संग कुञ्जी "18" कडा। त्यसपछि तपाईं वितरण र क्रैन्कशाफ्ट मा उपलब्ध लेबल संयोजन गर्न आवश्यक छ। जब पहिलो सिलिन्डर को पिस्टन शीर्ष मृत केन्द्र हुनुपर्छ। यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने? बस स्पार्क प्लग हटाउन र त्यसको ठाउँमा लामो "चिल्नु" एक पेचकस स्थापना गर्नुहोस्। अर्को, बिस्तारै स्क्रोल चरखी बोल्ट, यसको स्थिति अनुगमन। रूपमा चाँडै टिप माथिल्लो स्थिति पुग्छ, यो TDC सिलिन्डर हुनेछ।
त्यसपछि, तनाव संयन्त्र सेट अर्थात्:
बोल्ट सेट (वा AWL) लम्बी प्वाल र 'platoons' रोलर मा। बेल्ट खींच बोल्ट स्थापना पछि। तपाईं एक खास क्लिक सुन्न हुनेछ। तसर्थ, बेल्ट स्वतः tensioned छ। फेरि एक पटक, हामी सबै लेबल को संयोग जाँच गर्नुहोस्। खैर, तिनीहरूले प्लास्टिक बेल्ट आवरण मा नक्कल छन्।
अर्को चरण मा, समायोजन स्क्रू बारी र दुई पालैपालो घडीको दिशामा रोलर क्रैन्कशाफ्ट स्क्रोल गर्नुहोस्। यदि लेबल हराएको छैन, त्यसपछि "टाटा-एक्सेन्ट" समय बेल्ट प्रतिस्थापन सफल छ गर्न। खैर, तपाईं नै समय पाँचौ वा चौथो गियर मा खोल्दै को स्टार्टर मोटर घुमाउन सक्दैन र स्वयं।
त्यसपछि इन्जिन तकिया पंप चरखी र प्लास्टिक केसिङ सेट। हाइड्रोलिक, वातानुकूलन र alternator बेल्ट - संलग्नहरू बारे मा भूल छैन। यो परीक्षण रनले पछि छ। मेशिन troit वा असामान्य शोर बनाउन हुँदैन।
परिवर्तन बनाउन हामी स्क्रू लागि बक्से वा कन्टेनर को एक जोडी उल्लेख गर्नुपर्छ।
तिनीहरूले स्थापित गर्दा भ्रमित प्राप्त गर्न ताकि, तिनीहरूलाई साइन इन गर्न उचित छ। बोल्ट एक टोक रेन्च दबाना र स्ट्रबेरी कुञ्जीहरू प्रयोग जोगिन।
त्यसैले हामी एक कार "टाटा-एक्सेन्ट" को समय बेल्ट प्रतिस्थापन कसरी बनाउने बाहिर समझ। बस दुई देखि स्टेशन मा यस्तो काम को लागत र आधा हजार, बेल्ट र रोलर को मूल्य गणना छैन (र यो एक प्लस एक र आधा-दुई हजार छ)। समय द्वारा सञ्चालन तपाईं लगभग दुई घण्टा हुनेछ।
को कार्बोरेटर VAZ कसरी समायोजन गर्ने?
टोयोटा Celsior: विनिर्देशों र वर्णन
साईट swimmers लागि। डर र त्रास बिना पौडी खेल्न कसरी सिक्न
बिरामी, तर तोड्न छैन। के गर्ने?
मानव शरीर मा रक्त को समारोह
कसरी विस्तार नङ को हटाउने